Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD, takhasusay R & D, wax soo saarka iyo iibinta kululaynta iyo waxyaabaha madhxiya tamarta lagu badbaadinayo. PAMAENS bixisaa rakibo, tababar iyo adeeg one-stop-iib aheyn ka dib. PAMAENS uu noqday hoggaamiyaha berrinkii codsigaaga technology warshadaha tamarta lagu badbaadinayo kululaynta ee Shiinaha iyo dibadda.
The jaakadaha ningax, taangiga iyo kululaynta durbaanka jaakadaha iyo kululeeyayaasha infrared oon aan si weyn kaliya yareeyo isticmaalka tamarta, iyada oo sii kordhaya oolnimada kaamerada, hagaajinta tayada wax soo saarka iyo duruufta shaqo. Intaa waxaa dheer, soo saarka waa ammaan in isticmaalka, saaxiibtinimo deegaanka, fududahay in la rakibo nolosha isticmaalka dheer, ammaan iyo qaab lagu kalsoonaan karo. jaakadaha Our ningax & bustayaal hubkaas ayaa loo isticmaalaa on khaanadaha, flanges, tuubooyinka, mashiinada caag ah, qalajiya, exchangers, nidaamka dhammayn iwm Drum & taangiga kululeeyayaasha waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo oo dhan cayn kasta oo dareere sida biyaha, qalabka kiimikada, malab, iyo saliid, xabagta iwm
xubno ka kululaynta, sida kululeeyaha kaydadka, kululeeyaha gariiradda, kululeeyaha embriyaha, kululeeyaha band dhoobada, Miikaa kululeeyaha band, tuuray-in kululeeyaha, hawada la qaboojiyey kululeeyaha iyo biyo la qaboojiyey kululeeyayaasha band, kaas oo lagu saleyn karaa on kululaynta dhululubo ee cayn kasta oo mashiin caag ah, oo ay ku jiraan extrusion, mashiinka wax taaj oo kale duro, mashiinka sawir silig, pelletize, mashiinka filim Suurka, warshadaynta caag ah iyo mashiinka vulcanizing, iwm tiirsan on technology kululaynta induction sare iyo sanado badan oo waayo aragnimo ah ee wax soo saarka ee kululeeyayaasha dhaqameed, waxaan ku kalsoonahay in ay bixiyaan tayo sare leh iyo kululeeyayaasha qiimaha induction wanaagsan, wada jir ah ula heer sare ah ka hor inta uusan tababarka iibka iyo ka dib adeegyada iibka.
Haatan waa inaan tiro ka mid ah dhakhaatiirta, sayidyadooda iyo injineero ka tirsan, kuwaas oo heegan u ah R & D ee technology electromagnetic. Intaa waxaa dheer, PAMAENS la shaqeeyaa kulliyadaha iyo jaamacadaha ee Shiinaha. Iyada oo faham qoto dheer oo kala duwan oo ka mid ah beeraha farsamo, PAMAENS waxaa ka go'an in ay soo koraya kululeeyayaasha induction codsiyada kala duwan
PAMAENS leeyahay ruuxa sharafta, hamiga, kartida iyo hufnaanta heer sare ah. Waxaan qaadan tamar kaydsiga ee ma aha oo kaliya sida xirfado laakiin sidoo kale mas'uul ka ah bulshada iyo dib our hooyo. aad oo dhan si ay u mahad Naseexayn, waxaana ay rajeynayaan inay la shaqeeyaan shirkadaha ee Shiinaha iyo dibedda si ay u wada abuuri UU YAQINSAN YAHAY mustaqbalka wanaagsan caadi ah.
PAMAENS heleen shahaadooyin ISO9001 CE iyo RoHS. Waxay khusaysaa baaritaan adag iyo gacan ku haynta qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha iyo sidoo kale tallaabo processing kasta. PAMAENS waxaa idman rights.The dejinta iyo dhoofinta wax soo saarka waxaa loo iibiyey in Europe, Bariga Dhexe, South Eastern Asian, Australia, Maraykanka, Taiwan iwm Waxaa naga go'an in ay bixiyaan:
alaabta oo tayo sare leh
tababarka Free of rakibaadda iyo dayactirka
Hal sano warranty
OEM iyo adeegyada design